Bitcoin ဈေးကျခြင်းရဲ့နောက်ကွယ် — Steemit
thuraaunghtet (56)in #cryptos •4years ago
crypto currency market ကြီးတစ်ခုလုံး အနီရောင်တွေလွှမ်းနေလိုက်တာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး။
ရှေ့ဆောင်နွားလားဖြောင့်ဖြောင့်သွားတော့ နောက်နွားတစ်သိုက် ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်တာလဲ မဆန်းဘူးပေါ့။ Bitcoin ဆိုတာ coin တွေအားလုံးရဲ့ leader ကြီးလေ။ သူကိုယ်တိုင်ကိုက ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရပြီး သွေးချင်းချင်းနီနေပြီ။
အဘယ်ကြောင့် bitcoin ဈေးကျရပါသလဲ?
အရင်လက Facebook က crypto ကြော်ငြာတွေကို ban ခဲ့တယ်။ ဟော အခု လာပြန်ပြီ။ google.com ။
social media တွေထဲမှာ နံပါတ် တစ်ဖြစ်တဲ့ Facebook က တစ်ခါ crypto ban ခဲ့လို့ bitcoin က အားပျော့နေပါတယ်ဆိုမှ search engine တွေထဲမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ Google ကပါ ဒုတိယမ္ပိ ထိုးနှက်တော့ bitcoin ခမျာ အလဲလဲအပြိုပြို ဖြစ်ရရှာပြန်ပေါ့လေ။
နောက်ထပ်သတင်းဆိုးတစ်ခုကတော့ twitter ကပါ crypto ကို ban မယ်ဆိုတဲ့အကြံဆိုးကြီးထုတ်နေပါသတဲ့။
Writer = @thuraaunghtet
4 years ago in #cryptos by thuraaunghtet (56)
- Author $37.33, 0.00 TRX
This post receiveda$2.520 (75.52%) upvote from @upvotewhale thanks to @thuraaunghtet! For more information, check out my profile!
You gota3.13% upvote from @allaz courtesy of @thuraaunghtet!
You gota8.33% upvote from @nado.bot courtesy of @thuraaunghtet!
Congratulations @thuraaunghtet, this post is the ninth most rewarded post (based on pending payouts) in the last 12 hours written byaNewbie account holder (accounts that hold between 0.01 and 0.1 Mega Vests). The total number of posts by newbie account holders during this period was 2842 and the total pending payments to posts in this category was $1714.85. To see the full list of highest paid posts across all accounts categories, click here.